Ikhaya-Iindaba zeSikolo ngoku: Iindaba zeSikolo ngoku
Ulwabiwo lweFacebook lwaBafundi baseNigeria 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal
I-Facebook Scholarship yaBafundi baseNigeria: I-Facebook lelinye lawona maqonga amajelo asekuhlaleni apho abantu badibana nabo babaziyo / banokufuna ukwazi. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba liqonga lokuncokola, ikwayiqonga lokwazisa amashishini. Ngaphaya koko, ikwaliqonga elinikezela ngezifundo zokunkcenkceshela umlomo kubafundi. Kuvakala kumangalisa, akunjalo? Ewe […]
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Inqaku labahleli beTMLT ngoJuni 17, 2021
Ulwabiwo-mali ukuze ufunde kwelinye ilizwe laBafundi baseNigeria uLuhlu lweZicelo ze-2021
I-Scholarship to Study Abroad for Nigerian Students: Ngaba uyazi ukuba kukho izibonelelo ezinxulumene nokuba ngumNigeria? Kwaye ukuba ezinye zezi zibonelelo zibonakalisa ezifundweni ngohlobo lokufunda ukuze ufunde kwelinye ilizwe? Kuya kufuneka uyazi oku. Kwakhona, ezi bhasari zenzelwe ngokukodwa ukuhlangabezana neemfuno zezemali zabafundi baseNigeria. Nangona kunjalo, nangona ezi […]
Ithagethi yesicelo seScholarship Portal collegescholarships.org 2021 Uhlaziyo
Isicelo seScholarship Target: I-Target Corporation inikezela ngenani lokufunda kunye nokunika amathuba abafundi. Nangona kunjalo, abafundi kufuneka bahlangabezane neekhrayitheriya zokufaneleka. Ukongeza, amaqabane ekujoliswe kuwo ekufundiseni kunye neminye imibutho ukwenza amabhaso ongezelelweyo emali. Ke, abafundi banokufikelela kwezi nkxaso-mali kwi-Intanethi ngaphandle kweendleko. Nangona kunjalo, ukwazi okungakumbi malunga nale nkxaso-mali kunye nokufaneleka kwayo […]
Ukukhubazeka kweMicrosoft Scholarship 2021/2022 yoHlaziyo lweZiko lokuSebenza
Ukukhubazeka kweMicrosoft Scholarship: Le nkxaso mali yokufunda yenzelwe ukunceda abo bakhubazekileyo. Ke, ukuba unayo nayiphi na indlela yokukhubazeka kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nkcukacha. Funda eli nqaku ukuze ufunde ngakumbi ngale nto yokufunda iMicrosoft yokukhubazeka. Ndithembe, uya konwaba xa usenzile. Iinjongo zeMicrosoft Scholarship yokuKhubazeka […]
Ulwabiwo-mali oluphezulu kakhulu lwe-2021 lwaBafundi beZizwe ngeFom Portal
Ulwabiwo-mali oluphezulu: Njengomfundi wamazwe aphesheya zininzi izifundi onokufumana kuzo. Nangona kunjalo, konke okufuneka ukwenze kukuhlangabezana neemfuno kwaye ufake isicelo. Kule nqaku uza kufumana ulwazi malunga namanye ala manqaku. Kananjalo uya kufunda malunga nokuba ungafikelela njani kwaye phi kuyo. Kungoko kufuneka […]
Ukufundiswa kwe-MPH kwi-Intanethi yaMazwe aKhulayo i-2021 yeFom Portal
Ukufundiswa kwe-MPH kwi-Intanethi yaMazwe aKhulayo: Ngaba unqwenela ukufumana iMasters yaseBritane kwiNzululwazi kwiMpilo yoLuntu kwiDyunivesithi yaseSuffolk nge-UNICAF? Ukuba ewe, ke le mfundo yeyakho. Kwakhona, esi sibonelelo sijolise ekunikezeleni ngoncedo lwezezimali kwelo phupha lakho. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba unike ingqalelo kwi […]
I-Harvard University Scholarships 2021/2022 yoPhuculo lweeNdawo zoPhuculo
IYunivesithi yaseHarvard 2021: Ngaba ungumfundi onethemba lokufunda eHarvard? Ngaba unqwenela isifundi sokufunda eHarvard? Okanye, ngaba iHarvard sisikolo sakho samaphupha kodwa awukwazi ukusifumana? Ndinolwazi olunokukunika umdla. Isibonelelo seYunivesithi yaseHarvard ye2021 sivulekile. Eli nqaku likubonelela nge […]
I-ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladeshi 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal
I-ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladesh: Nantsi into enomdla kubafundi beBangladesh. Kukho isifundi sakho. Oku kubonelelwa liBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko (ICCR). Funda phantsi ngononophelo ukuze ufumane iinkcukacha ezipheleleyo. Abafundi baseBangladesh bangafaka isicelo se-ICCR Scholarship 2021. Eli nqaku likunika ulwazi oluyimfuneko ekufuneka uyazi. […]
I-Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Jonga uPhuculo lweSicelo sePortal
I-Apple WWDC Scholarship: Njengendlela yokuxabisa abathengi bakhe, iApple ibonelela ngezifundo kubafundi. Kwakhona, le ngxowa-mali kukunceda abafundi abanomngeni wezezimali ukuqhubela phambili imfundo yabo. Ngapha koko, ikwajolise ekwakheni amandla nasekuphuhlisweni kwabasebenzi. Kananjalo, kubalulekile ukuba uzame. Awunanto kwi […]
I-Commonwealth Scholarship yaBafundi baseNigeria 2021 yesicelo sePortal
I-Commonwealth Scholarship yaBafundi baseNigeria: Njengomfundi wesizwe seCommonwealth kukho amathuba okubhaliswa onokufumana kuwo. Ke, njengomfundi waseNigeria (ilizwe eliDibeneyo), unokuxhamla kwezi zifundo. Nangona kunjalo, nangona kukho iimfuno, eli nqaku likunika ulwazi olubalulekileyo ngendlela yokufaka ezinye zazo. […]
IHaryana Scholarship 2021/2022 yesicelo sePortal haryana.gov.in
Njengomfundi ovela eHaryana urhulumente waseHaryana ufundela u-2021 ulapha. Isimahla kwaye ixhaswa ngemali lithuba lemfundo. IHaryana Scholarship 2021 lithuba elihle kuwe. Nceda uqaphele olu lwazi lubalulekileyo. Urhulumente waseHaryana ubonelele ngenani elifanelekileyo lokufunda. Bajonge iseshoni yezifundo ye-2021/2022. Kweli nqaku […]
I-7 eyona nto ndifuna ukuyifunda kwamanye amazwe nge-Free Scholarship 2021/2022 Portal
Ndifuna ukufunda kwelinye ilizwe ngokuSholarship yasimahla: Ukufunda phesheya kuye kwaba liphupha labafundi abaninzi. Nangona kunjalo, iindleko eziphezulu zokufunda zihlala zilibona eli phupha. Kodwa uza kuthini xa ukuxelela ukuba ikhona indlela? Kananjalo, kuthekani ukuba ukuxelela ukuba kusekho ithemba lokufunda phesheya simahla, ungakholelwa? Ndivumele […]
I-17 yeeScholarship zoBunjineli eziFundisiweyo ngokupheleleyo 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal
I-17 yeyona bhasari ifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo: Imfundo kunye nolwazi abathi ngamandla. Yinto entle ukuba siza kube sixoxa sobabini kweli nqaku. Kule nqaku, kukho isiqwenga solwazi olubalulekileyo malunga nezifundo zobunjineli ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo. Ke, ukuba ubukhangela izifundiswa ezikhethelwe abafundi bezobunjineli, nceda ufunde. 17 Okugqwesileyo […]
Isifundo eJamani I-2021 yeFom yeSicelo eFundisiweyo
Isifundo eJamani iScholarship eFundly ngokupheleleyo: EJamani, imfundo yenziwa lula. Kukho izifundiswa ezenza oku kwenzeke. Kwakhona, ezinye zezi nkxaso mali ziza neephakeji ezimangalisayo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngezi zifundo, nikela ingqalelo kulwazi olukule nqaku. Kweli nqaku, uya kufunda ukuba / ungasifaka kanjani […]
Ulwabiwo-mali ngokusekwe kwi-SAT Scores 2021/2022 yoPhuculo lweSango lokuHlolwa
I-Scholarship esekwe kumanqaku eSAT: Njengomfundi ofuna isifundi, nceda umamele. Kukho izifundi onokuthi uzifumane ngokusekelwe kumanqaku akho eSAT. Ngamagama ngokulandelelana, ezi mfundo zifuna ukuba nenqaku elithile le-SAT. Ke, kukho imfuneko yokugcina amanqaku e-SAT ephezulu kwaye egqwesile. Ukuba unqwenela ukuva ngakumbi, […]
Umviwa we-Fenix ​​wamazwe apheleleyo kuLudwe oluDwelisiweyo 2021/2022 Uluhlu lwePDF Ukukhuphela
Abaviwa abaKhethiweyo abaFutshane kuFenix ​​bamazwe aphesheya i-2021 iphumile: Amagama abagqatswa abakuluhlu olufutshane kuluhlu lweFenix ​​akhutshiwe. Ngaba ufake isicelo seFenix ​​International 2021 kwiphepha elisesikweni www.fenixintl.com? Emva koko usenokuzibuza ukuba ungamjonga njani umgqatswa weFenix ​​wamazwe aphesheya kuLuhlu olufutshane ku-2021. Ungakhathazeki yonke le mixholo ingafumaneka kwi […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Inqaku labahleli beTMLT ngoJuni 18, 2021
Faka isicelo ngoku kwi-UNDP Job e-Abuja kwiNkqubo ye-2021
Faka isicelo ngoku kwi-UNDP Job e-Abuja 2021: Ngaba ujonge umsebenzi eNigeria 2021? Ngaba ungathanda ukusebenza kwi-UNDP? Kananjalo awuyi kucinga ukuba sikukhokela ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokufumana imisebenzi kwi-UNDP eNigeria nangaphaya? Ukuba ewe, qhubeka ufunda. Inkqubo yoPhuhliso yeZizwe eziManyeneyo […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021	• 0 Comments
Amathuba oMsebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Uhlaziyo
Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC): I-PricewaterhouseCooper iqesha izikhundla zemisebenzi eliqela. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nesiDanga seBachelor kwimisebenzi okanye kwimihlaba enxulumene noko. I-PwC inceda umbutho kunye nabantu ukwenza ixabiso abalifunayo. Sinothungelwano lweefemu kumazwe ali-158 anabantu abangaphezulu kwe-180,000 abazinikele ekunikezeleni umgangatho […]
IPricewaterhouseCooper (PwC) Ukuqeshwa kwabaNcedisi kuLawulo ngo-2021: I-PricewaterhouseCooper ifunela abaNcedisi boLawulo. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nesiDanga seBachelor kwi-Akhawuntingi, ezeMali, ezoQoqosho, iiNkcukacha-manani, uMthetho okanye iindawo ezinxulumene noko. I-PwC inceda umbutho kunye nabantu ukwenza ixabiso abalifunayo. Sinothungelwano lweefemu kumazwe ali-158 anabantu abangaphezulu kwama-180,000 […]
Ukufumana amagumbi asebenza ngokuBamba uSekela Mlawuli oPhetheyo: I-PricewaterhouseCooper kugaywa uSekela Mlawuli oLawulayo. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe namava eminyaka emi-5 ubuncinci kwifemu yeBhanki yotyalo mali. I-PricewaterhouseCooper (PwC) - Umxhasi wethu kwicandelo le-Investment Banking ujonge ukugcwalisa indima engezantsi: Isihloko Somsebenzi: USekela-Mlawuli Olawulayo Inombolo Yesalathiso: 130-PEO00859 […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJuni 18, 2021	• 0 Comments
Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) i-2021: I-PricewaterhouseCooper ifunela i-Junior Economists. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nobuncinci beBachelor's Degree kwisiNgesi, kwiMathematika, kwiSayensi yezeNtlalo okanye kuqeqesho lwezoQoqosho. Iifemu ze-PwC zinceda imibutho kunye nabantu ukuba benze ixabiso abalifunayo. Sinothungelwano lweefemu kwi158 […]
Faka isicelo ngoku ngokuQesha okuqhubekayo ePricewaterhouseCooper (PwC) 2021: I-PricewaterhouseCooper igaya abaNcedisi boLawulo. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nesiDanga seBachelor kwimisebenzi okanye kwimihlaba enxulumene noko. IPricewaterhouseCooper (PwC) -Iklayenti yethu, inkampani eqinisekisiweyo ye-ISO 9001: 2008 ebonelela ngokuHlola, ukuQeqesha kunye neenkonzo zokufikelela kwiintambo kwi-Oyile neRhasi, uLwandle kunye noShishino loKwakha. […]
I-MBA kwiTekhnoloji yoLwazi 2021 Iinkcukacha, Isilabhasi kunye neMisebenzi
Ngaba uyafuna ukufumana i-MBA kwiTekhnoloji yoLwazi? Itekhnoloji yolwazi ibisisiseko sokuchaza kwakhona ukuba kuthetha ukuthini ukusebenza, ukusebenza kakuhle, ukuvelisa, kunye nokubonelela ngenkonzo exabisekileyo. Ifundisa abafundi ukuba baziqhubele phambili njani iiprojekthi kunye nokulawula amaqela esoftware. Funda ulwazi oluthe kratya. I-MBA […]
Kufakwe kuyo Education by Inqaku labahleli beTMLT ngoJuni 18, 2021
Imizekelo yesincoko esineSatire 2021 S Isikhokelo kwisincoko esifanelekileyo seSatire
Ayizizo zonke izincoko ezenzelwe ukuba nesandi esinzulu kunye nesalelayo. Ngamanye amaxesha, izincoko kunokuba mnandi ukuzifunda. Isincoko esincomayo ngumzekelo obalaseleyo wesincoko esonwabisa kakhulu. Kweli nqaku, siza kukukhokela ngokubhala isincoko esifanelekileyo; Kananjalo nokukunika esona satire sihle […]
Isisombululo seNgxaki sisisombululo, jonga isikhokelo ngenyathelo nenyathelo kunye nomzekelo
Iingxaki zezisombululo zezincoko yindlela eyaziwayo yokukholisa. Kwezi zincoko, kufuneka uchaze ingxaki, uqinisekise umfundi ukuba ayikhathalele ingxaki, acebise isisombululo, kwaye azilungiselele ukuphelisa naziphi na izichaso. Oku kunye nokunye okuninzi njengesikhokelo samanyathelo ngamanyathelo, ndiza kuthi kweli nqaku ndikubhalele. Vumela […]
Apha ngezantsi luluhlu lwemisebenzi ehlawulwa kakhulu kwabafundi abaphumeleleyo eMelika. Ngokwengxelo yakutshanje yeGlassdoor.com, oogqirha kunye negqwetha lendawo yengingqi isengabasebenzi abahola kakhulu kweli lizwe. Ukujonga oku, amakhondo ezonyango kunye nomthetho kubonakala ngathi kunenzuzo enkulu ngokwezezimali. Fumana iinkcukacha ezingezantsi. Ukuqulunqa uluhlu lwayo eyona Ndleko ihlawulwa […]
Kufakwe kuyo Education by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021	• 1 Comment
Imixholo yesincoko sokuvavanya 2021 Jonga uLuhlu oluHlaziyiweyo oluBanzi
Kule nqaku uza kubona imizekelo yezihloko zezincoko zokuvavanya. Esi sincoko senzelwe ukubonisa umgangatho opheleleyo wento ethile. Inokuba yinto, inkonzo, imveliso kunye nendawo. Nangona kunjalo, ukuvakalisa uluvo lomntu akwanelanga. Umbhali kulindeleke ukuba enze uphando olunzulu ngesihloko. Ufanele ukuba […]
Inqanaba lokwamkelwa kweYunivesithi yaseRichmond kunye neemfuno zokungeniswa 2021
Inqanaba lokwamkela iYunivesithi yaseRichmond sisiqwenga solwazi esenzelwe ukuba ubambe iminwe yakho ukuba unomdla wokubhalisa kuyo nayiphi na inkqubo yeYunivesithi yaseRichmond. Ke funda imixholo yeli phepha ngokwenkolo ukuze uxhobise ngolwazi olwaneleyo. Into Ofanele Uyazi Malunga neYunivesithi yaseRichmond yeYunivesithi yaseRichmond abafundi bangahamba mhlophe […]
IINDABA ZESIKOLO NGOKU
Unilorin Portal Remedial Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Uhlaziyo lwamva nje
Unilorin Portal Remedial Portal: Oku kukwazisa bonke abafundi abadala kunye nabaza kuba ngabafundi ukuba iYunivesithi yaseIlorin yokulungisa i-portal iyasebenza. Eli phepha liya kukunika umbono wokuba ulindele ntoni kwi-portal. Kwakhona, iya kukukhokela kwindlela yokufikelela kwi-portal kwaye ihlaziywe xa uluhlu lokwamkelwa […]
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Inqaku labahleli beTMLT ngoJuni 18, 2021
I-AAUA Portal Student www.aaua.edu.ng/b/student/ Uhlaziyo lwesicelo samva nje
I-AAUA Portal yabafundi: Igunya leYunivesithi yaseAdekunle Ajasin lenze ukuba i-portal yabafundi iqhubeke. Kwaye le portal kukwenza imisebenzi yezifundo zabafundi ibe lula. I-AAUA ngurhulumente kaRhulumente ophethwe kwaye usebenze eyunivesithi yaseNigeria. Nangona kunjalo, qhubeka nje ufunde eli nqaku ukuze ufunde okungakumbi. Kodwa kuqala, wazi ntoni ngeAdekunle Ajasin University (AAUA)? […]
Ukungena kwePortal yabafundi be-OAU www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Uhlaziyo lwamva nje
Ukungena kwePortal yokungena kwabafundi: Igunya le-OAU lenze i-portal yomfundi Kwaye le portal ibonelela bonke abafundi abanokuba nolwazi malunga neenkqubo zokwamkelwa kweziko. Kwakhona, kule portal, abafundi abatsha kunye nabafundi ababuyayo baya kunikwa phantse yonke into abayifunayo ukwenza ukuba ukufunda kwabo kube lula kwaye kube ngcono ngakumbi kwiziko. IYunivesithi yaseObafemi Awolowo (OAU) Obafemi […]
Portal yeBIU www.biu.edu.ng/ Jonga uHlaziyo lwangoku lweSicelo 2021
I-BIU Portal: Igunya leYunivesithi yaseBenson Idahosa lenze ukuba i-portal yabafundi iqhubeke. Ke, njengomfundi okanye umfundi oza kuba sesikolweni, olu lwazi kufuneka lube nomdla kuwe. Kwakhona, kweli nqaku, uya kufumana ulwazi malunga nendlela yokungena kwi-portal ye-BIU. Kodwa kuqala, ngaphambi kokuntywila kuloo nto, wazi ntoni malunga […]
I-FUNAAB Portal yaBafundi www.unaab.edu.ng/ Jonga iPortal yesicelo samva nje
I-FUNAAB Portal yaBafundi: Ukuba ujonga ikhonkco elisemthethweni lokungena kwiYunivesithi yezoLimo i-Abeokuta portal, ke ukwiphepha lasekunene. Kule nqaku, uya kufunda malunga ne-FUNAAB portal yomfundi. Kwi-portal ungenza imisebenzi efana nokujonga iziphumo, ukuhlawula iifizi zesikolo, […]
I-OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Jonga uHlaziyo lwamva nje
I-OFFA Poly Portal: Njengomfundi we-OFFA polytechnic, olu lwazi luya kuba ngumdla kuwe. Kukho uyilo ngokukhethekileyo lwabafundi be-OFFA Poly. Kule portal, imisebenzi emininzi yokufunda inokwenziwa ngokukhululeka. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ufunde eli nqaku ukuze ufunde ngakumbi malunga nendlela […]
Amagama ali-100 + aMnandi mhlawumbi awazi ukuba angakwenza uhleke
Amagama ahlekisayo ayonwabisa ukuwathetha. Xa ucinga ngako, amanye amagama kulwimi lwesiNgesi anokuvakala kamnandi. Kwaye xa sisithi "sinomdla" sithetha ukuba siyothusa kwaye si-wacky. Kodwa ke, yeyona nto ibenza bonwabe, akunjalo? Amagama ahlekisayo Le yingqokelela yamagama ahlekisayo kunye neentsingiselo zawo. Baphosa kwi […]
Kufakwe kuyo amanqaku by Inqaku labahleli beTMLT ngoJuni 18, 2021
Ungazisusa njani iigundane ekhaya ngokukuko nangokufanelekileyo
Into enomdla kukuba, ezona zinto zincinci nezingabalulekanga kobu bomi zinokusibangela eyona ngxaki kunye neengxaki. Kuvakala kukrakra ukucinga ukuba ezinye izinto ezinje ngomzuzu zinokutsala kakhulu kwaye zihoye kwaye zibangele ukuphazamiseka okungaka. Inani elingenakubalwa labantu libuze indlela yokuphelisa iigundane kwi […]
UNowa intsingiselo yegama, imvelaphi, ukuthandwa kunye namagama afanayo
Ngaba ujonge igama lwanamhlanje lomntwana wakho oyinkwenkwe? UNowa unokukhetha ngokufanelekileyo. Makhe sijonge igama likaNowa, iMvelaphi, kunye noPhando kwaye ukuba lelona gama lilungileyo lomntwana oyinkwenkwe. Igama uNowa ngokuyintloko ligama lendoda elinemvelaphi yesiHebhere elithetha ukuphumla. Ngokusisiseko […]
I-BLW Portal Staff www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Uhlaziyo lwamva nje
I-BLW Portal yabasebenzi: Ngaba uzama ukungena kwi-BLW Portal Staff? Eyona ndlela ilula yokwenza oko kukusebenzisa amakhonkco asemthethweni aya kubonelelwa ngezantsi. Sigcina lonke amakhonkco esesikhathini ngawo onke amaxesha. Kwakhona, ukuba ufuna ukungena kwiBLW Staff Portal, ke kukho indlela elula kakhulu […]
Amanqaku ali-18 okonwaba ngam Wonke umntu angathanda ukwazi
Amanqaku oNwaba malunga Nam: Ukuba ubuya kwenza uluhlu lwe "zinto ezimnandi ngam," ubuya kubandakanya ntoni? Ndiyazi ukuba kunjani xa ucelwa ukuba uxele iinyani ezimnandi malunga nawe. Amaxesha amaninzi uyabhideka kwizinto onokuzithetha ukwenza isivakalisi ngokwakho. Kwi […]
Ishishini lezoThutho: Ngaba uyafuna ukwenza imali ngokuhambisa abantu kunye nempahla ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye? Ukuba ewe, eli nqaku liza kukukhokela malunga nendlela yokuqalisa ishishini lezothutho. Ukuqala ishishini lezothutho kufuna ukuba uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lweshishini ocinga ukulenza, elibandakanya ukuqasha ibhayisekile, inkonzo yeeteksi, […]
Uhlelo lokuGcina ootitshala ngo-2021: 10 IiNkqubo zoMgangatho oMangalisayo zoTitshala
Uhlelo lokuGcina ootitshala: Ukunyuka kwetekhnoloji yeselfowuni kuye kwabangela inguquko engazange ibonwe ngaphambili yokufunda nokufundisa. Itekhnoloji eshukumayo iyitshabalalisile imida, yavula amathuba amatsha okufunda, kwaye, okona kubaluleke kakhulu, yolule amathuba okufunda ukubandakanya indawo ebonakalayo. Ngale nto kuza ubhetyebhetye kunye nokuhamba gwenxa ngokubhekisele kwinguqu ye-tempo-geographical ejikeleze ukufunda. Njenge […]
Kufakwe kuyo amanqaku by Abasebenzi ngoJuni 18, 2021
Izikhundla Zomkhosi waseNigeria-Jonga uluhlu olupheleleyo lweMigangatho yamajoni eNigeria Apha
Inqanaba lomkhosi waseNigeria ngumqondiso wasemkhosini osetyenziswa nguMkhosi oxhobileyo waseNigeria. Apha ngezantsi luluhlu lwazo zonke izikhundla zomkhosi waseNigeria ngokulandelelana kwazo. Inqanaba lomkhosi liqulathe okanye lahlulahlulwe laba ziinxalenye ezimbini, amagosa agunyazisiweyo nalawo angathunyelwanga. Isebe ngalinye lenkonzo yomkhosi oxhobileyo waseNigeria linophawu olunxulumene noko. […]
Kufakwe kuyo amanqaku by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021	• 0 Comments